I Belmont Umbiko uveza ukuthi isimiso of Inhlonipho Lwabantu inezingxenye ezimbili ezihlukene: (1) abantu kufanele aphathwe njengomuntu ezizimele kanye (2) abantu ukuzimela elincane kumele banikezwe inhlonipho Ukuvikeleka ezengeziwe. Ukuzimela kalukhuni oluhambisana nokwazisa abantu ukulawula ukuphila kwabo siqu. Ngamanye amazwi, Inhlonipho Lwabantu kusikisela ukuthi abacwaningi akufanele senze izinto ukuze abantu ngaphandle kwemvume yabo. Ngalokujulile, lokhu kunesithembiso ngisho uma umcwaningi ucabanga ukuthi into okwenzekayo akuyona ingozi noma ngisho ezuzisayo. Ukuhlonipha Persons kuholela umqondo wokuthi ababambiqhaza-hhayi abacwaningi-uyanquma.
Ngo practice, isimiso Inhlonipho Lwabantu iye wabachazela kusho ukuthi abacwaningi okufanele, uma kungenzeka, ukuthola imvume unolwazi kusuka abahlanganyeli. Umqondo oyisisekelo kwemvume unolwazi wukuthi ababambiqhaza kufanele banikelwe ulwazi olufanele ngendlela format oluqondakalayo bese kufanele bonke abaqhutshwa yinhliziyo evumayo ngivumelana iqhaza. Ngayinye yalezi imigomo uqobo bekulokhu ngendaba lobuKhristu mpikiswano eyengeziwe kanye nama-scholarship (Manson and O'Neill 2007) Mina, futhi ngizobe uyinikele esigabeni sonke kamuva kulesi sahluko lokunquma ngemva kokwaziswa.
Ukusebenzisa isimiso of Ukuhlonipha Abantu izibonelo ezintathu eziphawulwe kusukela ekuqaleni kwesahluko amaphuzu avelele izindawo ezikhathazayo ngamunye wabo. Esimweni ngasinye, abacwaningi benza izinto abahlanganyeli-esetshenziswa idatha yabo (Taste, Ties, noma i-Time), wasebenzisa i-computer ukuze enze umsebenzi nesilinganiso (Encore), noma wabhalisa nabo UCWANINGO (Contagion Emotional) alikho kwemvume yabo noma nokuqwashisa . I ukwephulwa isimiso Inhlonipho Lwabantu akusho ngokuzenzakalelayo ukwenza lezi zifundo ngobulungiswa impermissible; Ukuhlonipha Persons ungomunye izimiso ezine. Kodwa, uma ecabanga ngalokho Inhlonipho Lwabantu enza basikisela ezinye izindlela ukuthi izifundo zingathuthukiswa ngobulungiswa. Ngokwesibonelo, abacwaningi babengase baye ayithole abasohlotsheni oluthile lwenkonzo kwemvume ababambiqhaza ngaphambi kwesifundo waqala noma ngemuva waphelela; Mina ngizoba buyela emuva kulemibuto kukho uma mina nixoxe imvume unolwazi kabanzi ngezansi. Ekugcineni, izazi zezimiso zokuziphatha ucwaningo agcizelele ukuthi ukukhathazeka mayelana nokuphula ukuzibusa kwabantu kuphakama ngisho esimweni wezifundo kungavamile ukuba ingozi ngokuphelele. Ukukhathazeka mayelana efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka kanye nezingozi ngokwemvelo ufaka ukucabangela izindinganiso zokuziphatha, kodwa ngokuvamile kubhekwane ngaphansi isimiso of Beneficence, isimiso sokuthi mina ayesezobashumayeza.